“Solskjær wuxuu inoo sheegay xirfadihii uu isticmaalay marka uu….” _ Martial – Gool FM
(Manchester) 17 Jan 2019. Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Anthony Martial ayaa shaaca ka qaaday talada uu ka helay macalinka ku meel gaarka ah ee Red Devils Ole Gunnar Solskjær.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu daabacay wareysi uu maanta bixiyay Anthony Martial, waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa.
“Waxaan kala hadlay Solskjær dhowr arimood ee kala duwan, wuxuu inoo sheegay xirfadihii uu isticmaalay markii uu ciyaaryahan ahaa, wuxuu inoo xaqiijiyay inaan nasiib ku leenahay inaan u ciyaarno Manchester United”.
“Aad ayay iigu fiican tahay inaan la shaqeeyo tababare xirfadiisa ciyaareed soo ahaa weeraryahan, wuxuu i siinayaa talo fiican, gaar ahaan marka ay sheekada la xiriirto goolka hortiisa, iyo qaabka ugu sahlan ee loo dhameystiri karo, wax badan ayuu iga caawiyay”.
“Talada ugu wanaagsan ee aan ka heley ayaa ah, inaan u baahanahay inaan ku ciyaaro awoodeyda, wuxuuna iga codsaday in aanan cadaadis badan saarin naftayda”.
Intaas kadib Anthony Martial ayaa wuxuu ka hadlay fikirkiisa kaga aadan suurtagalnimada uu Ole Gunnar Solskjær uu ku sii wadan karo shaqadiisa kooxda Manchester United.
“Wax walba si wanaagsan ayay u socdaan, qof walba waa uu faraxsan yahay, maxay tahay sababta diideysa inuu sii wato shaqadiisa kooxda?”.
Shabakada “Sky Sports” oo shaacisay xiliga ay sida rasmiga ah ugu dhawaaqi doonto Juventus heshiiska Ramsey